एप्पल ईयू कोड सप्ताह को समयमा नि: शुल्क प्रोग्रामिंग सत्र प्रस्ताव गर्दछ म म्याकबाट हुँ
एप्पल सबै उमेर को लागी सयौं नि: शुल्क प्रोग्रामिंग कोर्स प्रदान गर्दछ। यो पहल को उत्सव संग मेल खान्छ EU कोड हप्ता, जसमा युरोपेली आयोगले प्रोग्रामिंगलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ र हाम्रो जीवनमा यसको महत्त्व प्रदर्शन गर्न चाहन्छ।
EU कोड हप्ता यो आज, अक्टुबर start मा सुरू हुनेछ र अक्टुबर २२ मा समाप्त हुन्छ। गतिविधिहरू सबै उमेरका प्रयोगकर्ताहरूको उद्देश्य हो। र ती युरोपका सबै एप्पल स्टोरहरूमा हुनेछन्। कुलमा, एप्पलले एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेको छ कि यो दिन चाहान्छ यूरोप भर मा ,6.000००० कोर्स.
स्विफ्ट, एप्पलको प्रोग्रामिंग भाषा दुबै म्याक, आईओएस, वाचोस र टिभीओएसमा प्रोग्राम गर्न सक्षम हुन, सबै कोर्सहरूको केन्द्र हुनेछ। टिम कुक आफैंले भनेका छन्: "हामी विश्वास गर्छौं कि प्रोग्रामिंग भविष्यको भाषा हो र सबैले यो सिक्ने अवसर पाउनुपर्दछ।" सेसनहरु मध्ये जो सहभागीहरुमा अधिक लोकप्रियता प्राप्त गर्ने आशा राख्नेछन्ः "कोडि Start सुरु गर्नुहोस्", "प्लेटाइम: स्फेरो की भूलभुलैया" वा "स्विफ्ट खेल मैदानको साथ प्रोग्रामिंग रोबोट".
त्यस्तै, एप्पलसँग पहिले नै यसको आईबुक पुस्तकमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक पुस्तकहरू छन्, यसका सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि निःशुल्क पहुँच र ती हुन् शिक्षकहरूमा ध्यान केन्द्रित र स्वयं-सिकाइएको। अर्कोतर्फ, एप्पलले स्विफ्टमा प्रोग्रामि teach सिकाउने अर्को तरिका आईप्याडको लागि एक अनुप्रयोग हो जुन १ लाख भन्दा बढी डाउनलोडहरू जम्मा गर्दछ। बारेमा स्विफ्ट प्लेग्रुपहरू.
अन्तमा, र भविष्यको अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको प्लेटफर्मको लागि प्रोत्साहित गर्न, कपर्टिनोबाट आएका मानिसहरूले संकेत गरे कि युरोपमा १.1,36 भन्दा बढी कामहरू कम्प्युटि onमा केन्द्रित छन्। र त्यो धेरै बर्षमा, जब एप स्टोरले यसको ढोका खोल्यो, यसको प्लेटफर्ममा काम गर्ने विकासकर्ताहरूलाई १ 18.000,००० भन्दा बढी युरो तिरेको छ। यदि तपाईं यी कुनै पनि पाठ्यक्रमहरूमा भाग लिन रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले केवल यो लिंक भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » एप्पल ईयू कोड हप्ताको अवधिमा नि: शुल्क प्रोग्रामिंग सत्रहरू प्रदान गर्दछ
BookBook CaddySack, तपाइँको म्याक सामानहरू भण्डारण गर्न